Shiinaha Mabda'a Shaqada ee Warshadda Korontada Biriigu Abaaro iyo alaab-qeybiyeyaal. TieLiu
Kordhinta Awoodda Biriigu
Mabaadi'da Shaqeynta ee Awood Bixiye Awoodda
Faakiyuumka faakuumku wuxuu adeegsadaa mabaadii'da nuugista hawada marka matoorku shaqeynayo, taasoo abuureysa faakiyuumka dhinaca koowaad ee xoojiyaha. Iyada oo laga jawaabayo farqiga cadaadiska ee cadaadiska hawada caadiga ah ee dhinaca kale ah, farqiga cadaadiska waxaa loo isticmaalaa in lagu xoojiyo riixitaanka birta.
Haddii xitaa uu jiro farqi yar oo cadaadis ah oo u dhexeeya labada dhinac ee diaphragm-ka, sababtuna tahay aagga ballaaran ee diaphragm-ka, riix weyn ayaa wali la abuuri karaa si loogu riixo diaphragm-ka ilaa dhamaadka cadaadis hoose. Marka la jejebiyo, nidaamka xoojinta faakiyuumku wuxuu kaloo xakameeyaa faakuumka soo galaya xoojiyaha si uu diaphragm u dhaqaaqo, wuxuuna isticmaalaa usha riixista ee diaphragm-ka si ay uga caawiso bini'aadamka inuu ku istaago oo ku riixo marinka bareega aaladda isku dhafka ah.
Xaalada aan shaqeyneyn, guga soo noqoshada usha riixida wiishka xakamaynta ayaa ku riixeysa usheeda dhexe riix qolka qufulka ee dhinaca midig, marinka faakiyuumka faakuumka wuxuu kuyaala gobolka furan. Guga waalka xakamaynta wuxuu ka dhigayaa koobka koontoroolada koontaroolka iyo kursiga waalka hawada si dhow ula xiriir, sidaasna ku xiraya dekedda waalka hawada.
Waqtigaan, qolka gaaska faaruqa ah iyo qolka gaaska dalabka ee kobcinta waxaa lala socodsiinayaa kanaalka qolka gaaska arjiga iyadoo loo marayo kanaalka qolka gaaska faaruqda ah ee jirka bistoolada ilaa marinka kontoroolka waalka, waana laga go'doomiyey jawiga banaanka. Ka dib marka mashiinka la bilaabo, faakiyuumka (cadaadiska taban ee mishiinka) mashiinka qaadashada ee mashiinka ayaa kor ugu kici doona -0.0667mpa (taasi waa, qiimaha cadaadiska hawadu waa 0.0333mpa, iyo farqiga cadaadiska ee cadaadiska Hawada waa 0.0667mpa ). Kadib, faakiyuumka xoojiyaha iyo faakiyuumka qolka arjiga ayaa ku kordhay -0.0667mpa, waxayna diyaar u ahaayeen inay shaqeeyaan wakhti kasta.
Markaad jejebinayso, baydalka bareeggu wuu murugaysan yahay, xoogagga baydalkana waxaa ku weynaanaya kabaalka waxayna ku shaqeynayaan usha riixida waalka koontaroolka. Marka hore, guga soo noqoshada ee usha riixida waalka waa la cadaadiyey, oo usha lagu riixo waalka xakamaynta iyo tiirka hawo-mareenka ayaa horay u socda. Marka usha lagu riixo waalka xakamaynta uu horay ugu sii socdo meeshii uu koobka koobku ka xirmayo uu la xiriiro kursiga waalka faakiyuunka, dekedda waalka waalka ayaa xiran. Waqtigaan, faakuumka xoojiyaha iyo qolka arjiga waa lakala saaray.
Waqtigaan, dhamaadka khaanadda hawo-mareenka hawada ayaa kaliya la xiriiraysa dusha disk-falcelinta. Maaddaama usha lagu riixo waalka xakamaynta uu sii wado inuu horay u socdo, dekedda waalka waalka ayaa furi doona. Sifeynta hawada ka dib, hawada banaanka ah waxay soo galeysaa qolka arjiga ee xoojiyaha iyada oo loo marayo dekedda waalka hawada furan iyo kanaalka keena qolka hawada dalabka, waxaana soo saaraya xoogga howlgalka. Sababtoo ah walxaha saxanka falcelintu waxay leedahay shuruudaha hantida jirka ee cadaadiska halbeegga siman ee dusha sare ee culeyska saaran, xoogga shaqaaluhu wuxuu ku kordhayaa saamiga go'an (saamiga xoogga shaqada) iyadoo si tartiib tartiib ah loogu kordhinayo xoogga la gelinayo qalabka lagu riixo waalka. Xaddidaadda awoodeed ee adeegga, marka ugu sarreyso ciidanka xoogga la gaaro, taas oo ah, marka heerka faaruqinta qolka codsigu uu eber yahay, ciidanka howlwadeenku wuxuu noqonayaa mid joogto ah oo ma beddeli doono mar dambe. Waqtigaan, xoog wax ku biirinta iyo xoogga wax soo saar ee xoojiyaha ayaa ku kici doona isla qaddarka; markii biriiga la joojiyo, usha riixida waalka xakamaynta gadaal ayey u socotaa iyadoo la yareynayo xoogga la gelinayo. Markii la gaadho barta ugu badan ee kor u qaadista, ka dib marka la furo dekedda waalka furan, qalabka wax lagu buuxiyo iyo qolka hawo ee dalabka ayaa isku xidhan, heerka faakiyuumka ee qolka codsigu wuu yaraan doonaa, xoogagga adeegga ayaa hoos u dhacaya, jirka bistonkuna gadaal buu u socon doonaa . Sidan oo kale, kolba sida xoogga tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib
Waqtiga boostada: Sep-22-2020
NO.492 XingYuan Road, YuHang Degmada Hangzhou, Zhejiang, Shiinaha
Hordhaca Iyo Dhibaataynta T ...
Mabda'a Shaqada Awoodda Biriigu ...
Gawaarida Gawaarida, Kordhinta Biriigu Kadib, Kordhinta Awoodda Biriigu, Vacuum Biriigu xoojiyaa, Kiciye Assy Brake, Biriig Servo,